गृष्मा राजभण्डारी « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Author: गृष्मा राजभण्डारी
त्रासमा जिउन बाध्य अफगानीमाथि अर्को बज्रपात
६.१ म्यानिच्यूडको विनाशकारी भूकम्पले खुला आकाशमुनि बसेका, झुपडी र पक्की संरचनामा बसेकाहरूको जीवन नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । भूकम्पको केन्द्रविन्दु अफगानिस्तानको दुर्गम क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत भएको छ ।
पार्किङले धान्नेभन्दा बढी विमान र यात्रुको आउजाउ हुनु एउटा कारण भए पनि पुराना काम नलाग्ने जहाजले जमिन ओगट्दा यहाँको समस्या थप जटिल बनेको हो । वर्षौंदेखि बिग्रिएका १७ वटा जहाज
काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय सभागृहदेखि नारायणहिटी राजदरबारस्थित कार्यालयमा सेवाग्राहीहरू रातदिन लाइन लाग्न बाध्य छन् । उनीहरूको प्रश्न छ– लाइन लाग्ने बाध्यताबाट नेपालीले कहिले मुक्ति पाउने होला ?
चाँदीको ताल्चालाई चाँदीकै साँचोले खोलेर उद्घाटन गरेको कलेज खण्डहर बन्दै
काठमाडौं । जनताका सन्तान शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित नहुन भन्ने पवित्र उद्देश्य लिएर खोलिएको एक शताब्दी पुरानो त्रिचन्द्र क्याम्पस यतिबेला भग्नावशेषमा परिणत हुँदै छ । राजा महाराजादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म
उनीहरूले प्रजनन अधिकारदेखि नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत पहिचान खुलाउन नपाएको पीडा पोखेका छन् । कतिपय ठाउँमा समाजसँग जुध्ने सामर्थ्य नहुँदा आफ्नो परिचय लुकाएर बाँच्नु परेको विवशता यो समुदायको
काठमाडौं । अनाथ बालबालिकाको आश्रयस्थल रहेको बालसंगठन आर्थिक अभावका कारण थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । संस्था जर्जर अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँको भौतिक संरचना मात्र टीठलाग्दो अवस्थामा पुगेको छैन कि संस्थामा
विमानस्थल र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाइ दूर्घटना र आपतकालिन अवस्थाको प्रतिकार्यका लागि जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्न लागि नमुना अभ्यास गरेको हो । अभ्यासमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत दमकल,
काठमाडौं । कलाको संरक्षण गर्ने निकायभित्रै अमूल्य सिर्जनाको धज्जी उँडेको देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्ला ? राजधानीको ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुग्नुभयो भने स्वनामधन्य कलाकारको कला अस्तव्यस्त मात्र हैन, लोप हुने अवस्थामा
काठमाडौं । संसारकै उच्च धुरी सगरमाथा भएर मात्र हैन, थोरै भूगोल अन्तरमा पाइने फरक हावापानी, अनेकानेक धार्मिक संस्कृति परिवेश पर्यटक तान्ने प्रमुख हतियार हुन् । विश्व नै कोभिड संक्रमणले आतंकित
पाँचथरमा बंगुरपालनबाट महिला राम्रो आम्दानी गर्न सफल, वार्षिक १० लाख आम्दानी हुने